जन्मदिनको चकलेट बाँड्न पाएनन् बसन्तले, साथीहरु पर्खेर बसे तर उनी संधैका लागि यसरी अस्ताए ! – Etajakhabar
रत्ननगर । जन्मदिनको खुसियाली मनाउने योजना थियो वसन्त थापाको । अतिरिक्त कक्षा अध्ययनका लागि बिहानै विद्यालय पुगेका वसन्तका साथीले सुस्वास्थ्य, दिर्घायु अनि उज्जवल भविष्यको कामना गरे । सोमबारबाट १५ वर्षमा प्रवेश गरेका थिए उनी ।
बिहानी कक्षाबाट छुट्टिएको आधा घण्टा पनि नबित्दै सवारी दुर्घटनामा वसन्तको मृत्युको खबरले उनका साथी स्तब्ध भए ।
साथीलाई चकलेट बाँड्ने योजना बनाउँदै बिहानी कक्षा सकिएपछि वसन्त खाना खान घरतर्फ गएका थिए । फर्कंदा ढिलो हुने ठानेर उनले घर जाँदै मिठाइ किन्न सोच बनाए । जेब्राक्रसबाट बाटो पार गर्न लाग्दा सोमबार १५ वर्षीय वसन्तलाई बोलेरो गाडीले ठक्कर दियो । गाडीको ठक्करबाट जन्मेकै दिन उनले संसारबाट बिदा लिए ।
उनलाई जेब्रा क्रसिंङमै ना ४ च ५००७ नम्बरको बोलेरोले ठक्कर दिएको हो । ठक्करबाट घाइते भएका उनलाई बोलेरोको पछाडिबाट आएको ना ५ ख ७५९५ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएपछि बोलेरो वसन्तको शरीरमाथि चढेर अगाडि बढ्यो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका थापाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
थापा लाइसियम इन्टरनेशनल मोडल स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्थे । चैत्र १० गतेबाट सुरु हुने आधारभूत तहको परीक्षाका लागि तयारी कक्षा लिएका थिए उनले । ‘बिहानको प्रार्थना सभामा जन्मदिन मनाउने चलन भएकोले हामीले तयारी गरेका थियौं’ प्रिन्सिपल वसन्त अधिकारीले भने, ‘हामीले शुभकामना दिन पनि पाएनौं ।’
उनी रत्ननगर नगरपालिका १० कैलाश टोलस्थित हजुरबुबाको घरमा हजुरआमा र बुबासँग बस्दै आएका थिए । उनका बुबा जंगबहादुर विद्युत् वायरिङ र प्लम्बिङको काम गर्छन् । आमा पवित्रा राना बाग्लुङको जयमिनी नगरपालिका बिनाबारेमा बस्छिन् ।
पढ्न ठूलो बुबाको घरमा भाईसँगै बस्दै आएका थिए । उनका भाई संस्कार कक्षा एकमा पढ्छन् । बाग्लुङमा विद्यालय टाढा भएपछि उनका बाबुआमाले टाँडीमा ल्याएर पढाएका हुन् । कक्षाकै अनुशासत विद्यार्थीका रूपमा गनिने विद्यालयका लेखापाल मधुसूदन लामिछानेले बताए ।
‘त्यो कक्षाकै सबैभन्दा अनुशासित आँखैमा राखे नबिझाउने विद्यार्थी हुन्’, उनले भने, ‘साथीसँग जन्मदिन मनाउने योजना उनको अपुरै रह्यो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०५, २०७५ समय: १५:५०:५२
मृत्यु हुनुभन्दा अघि साथीलाई केहि भन्न चाहान्थिन रिना, साथीबाट खुल्यो थप रहस्य (भिडियो)
खाना खाएर सुतेका ड्राइभर सुतिरहेकै अवस्थामा मृत भेटिए
फेरी बढ्यो सुनको भाउ , हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो ?
ह्वातै बढ्यो कोरियन वन बाहेक अन्य देशको भाउ , हेर्नुहोस् कुन देशको विनियम दर कति ?
सरकार स्व मनमोहन अधिकारीका अधूरा सपना पूरा गर्न लागिपरेको छ – प्रधानमन्त्री ओली
बिश्वकै यो हो अनौठो आलु होटेल जहाँ जान मानिसहरु तछाडमछाड गर्छन् , पाइन्छ यस्तो सुविधा ?